Doorashada Mexico: Lopez Obrador oo ballan qaaday isbedel qotodheer kadib guushiisa ‘Sawirro’ | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Doorashada Mexico: Lopez Obrador oo ballan qaaday isbedel qotodheer kadib guushiisa ‘Sawirro’
Doorashada Mexico: Lopez Obrador oo ballan qaaday isbedel qotodheer kadib guushiisa ‘Sawirro’
Muqdisho (SNTV) Musharaxa xisbiga garabka bidix Andres Manuel Lopez Obrador ayaa sheegay inuu la imaan doono isbedel inta badan ku wajahnaan doono dhinaca masuq maasuqa.
Madaxweynaha cusub ee dalka Mexico ayaa la sheegay in la sugayo sida uu u wajihi doono cilqaaqaadka dalkiisa kala dhaxeeya xukuumadda Washinton, inkastoo fariin xagga Twitter-ka uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ugu hambalyeyay hogaamiyaha cusub ee dalka Mexico, balse waxaa weli taagan caradii ka dhalatay cambaareeynta Donald Trump ee xagga ganacsiga iyo Socdaalka uu usoo jeediyay Mexico.
Hogaamiyaha cusub ee dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador oo ay da’diisu tahay 64-sano jir ayaa ballan qaaday inuu xushmeeyn doono xorriyadda rayidka waxaana uu sheegay in uusan doonayn inuu noqdo keli talis muuqata ama mid dahsoon intaba.
Qaar kamid ah mucaaradka ayaa cabsi ka muujinaya in ninkan kasoo jeeda garabka bidix iyo siyaasadiisa baabulaaristaha ay dhaawici karayso dhaqaalaha horey uliitay islamarkaana ay Mexico ka dhigi karto mid lamid ah sida Venezuela oo kale taasi oo wajahaysa dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah iyo sicir barar faraha kasii baxay.
Tariikh nololeedka Hogaamiyaha cusub ee Mexico
Andrés Manuel López Obrador, waxa uu kasoo jeeda qoys dukaan leey ah waxaa uu dhashay 13 bishii Nofeember ee sanadkii 1953 tuulo kutaala miyiga Tepetitán, oo katirsan gobolka dhinaca koonfurta ee Tabasco state
Waxa uu caan ku ahaa magaca Amlo, oo ahaa mid uu isticmaali jiray bilowga magaciisa.
Waxaa loo doortay duqa mgaalada ee Mexico sanadkii 2000
Kadib markii uu ku guuldareystay doorashooyinkii madaxweynenimo sanadihii u dhaxeeyay 2006-2012, waxa uu hogaaminayay qatigan isbahaysi uu horkacayay Xisbiga Dhaq-dhaqaaqa Dhalinta Qaranka ee Garabka Bidix ee loo soo gaabiyo (Morena) kaasi oo uu aas aasay sanadkii 2014-kii.
Previous articleWejiga labaad ee dib u eegista Dastuurka oo la daah-furay
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre Oo Shir-gudoomiyay Kulanka Tubta Siyaasadda loo Dhanyahay